Dharka & Dhar -jarista Dijital ah - Taxanaha B3
B3 Nidaamka goynta dhijitaalka ah ee dhaadheer wuxuu ku ogaan karaa goynta, goynta badh, duugista, shiididda, feeridda iyo buulinta oo leh xawaare sare iyo saxnaan sare. Miiska wax lagu qaado, B3 wuxuu ku dhammaystiri karaa quudinta maaddada iyo ururinta si dhakhso leh. Aad bay ugu habboon tahay samaynta muunad, wax-soo-gaabin gaaban iyo wax-soo-saar ballaaran oo ku yaal Calaamadaha & Sawirada, Baakadaha, Baabuurta, Warshadaha Gasket-ka.
C5 waa mashiinka jarjaridda dhijitaalka ah oo leh shaqooyin badan sida hagaajin, dib-u-hagaajin, jeexitaan, qashin qaadis, goyn hal-goyn ah, ururinta. Waxay ogaataa goynta duudduub-duub-duubista iyo goynta-duudduub-goynta isla waqti isku mid ah, hawlgal ka hawl-yar marka la gooyo caaryada mindida. Madaxa goynta ayaa si toos ah u hagaajin kara booska u dhexeeya. C5 sidoo kale waxay taageertaa nidaamka xakamaynta bakhaarka caqliga leh si loo xaqiijiyo goynta otomaatiga ah iyo xawaaraha sare ..
C3 duudduuban si aad u duubto sumad-gooyuhu wuxuu bixiyaa xalalka goynta otomaatiga ah ee dhejiska iyo sumadaha, ku habboon wax-soo-gaaga gaaban iyo wax-soo-saarka ballaaran. C3 wuxuu dhammeyn karaa qashin-qaadista, kala-goynta, ururinta iyo dahaarka waqti isku mid ah, wuxuu taageeraa kala-goynta oo si buuxda u gooyaa dalabyo kala duwan. Dukaamada wax soo saara iyo kuwa tafaariiqda ah labaduba way isticmaali karaan mashiinkan.
AMEIDA waxay ku biirisay khibradeenna mashiinka goynta baahiyaha dhabta ah ee adeegsadayaasha, waxay ku dhisaan saamaynta xoogga leh qaab -dhismeedka warshadaha dharka.
A3 waxay ogaadaan qaab -dhismeedka iyo goynta qaab -dhismeedka, ka dhig qaabka beddelka alaabta inay fududahay in la shaqeeyo.
Nidaamka jarista dhijitaalka ah ee A11 waxaa loogu talagalay warshadaha Xayeysiinta, wuxuu ku xaqiijin karaa goynta iyo goynta badh xawaare sare iyo saxnaan sare, oo leh qiime aad u tartan badan.
Iyada oo istuudiyaha (quudiyaha xaashida) iyo nidaamka ururinta, A11 waxay ku dhammayn kartaa quudinta maaddada iyo ururinta si dhakhso leh. Aad bay ugu habboon tahay warqadda PP, dhejiska iyo goynta alaabada milicsiga.